Binge-Trigger Concept - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
comments: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုများနှင့်ဆောင်းပါးများကိုထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒါကမူးရူးသံသရာကျွန်တော်တို့ရဲ့သီအိုရီအဘို့သက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။ ဒါဟာအများအပြားယန္တရားများအစားအစာထဲမှာ binging အစပျိုးနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိင်စေခြင်းငှါပုံပေါ်ပေမယ့်နာတာရှည် overconsumption DeltaFosB နှင့်စွဲ-reltaed ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို၏စုဆောင်းခြင်းစေပါတယ်။
လေ့လာမှုအဝလွန်ခြင်း (2011) ဦးနှောက်ဆုကြေး Circuitry တွင်အင်ဆူလင်လှုပ်ရှားမှု Links
ဆဲလ်ဇီဝြဖစ်၏ဇွန်လပြဿနာတစ်ခုဆဲလ်စာနယ်ဇင်းထုတ်ဝေအတွက်သတင်းပို့သုတေသီများ, သူတို့အချို့ဆိုအဘယ်အရာကိုများ အင်ဆူလင်ကဦးနှောက်၏အကျိုးကို circuitry အပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ပထမဦးဆုံးအစိုင်အခဲသက်သေပြ။ အဘယ်သူ၏အကျိုးကိုခံရစင်တာများမရှိတော့အင်ဆူလင်တုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်ကြွက်ကပိုစားအဝလွန်ဖြစ်လာ, သူတို့ကပြသနေသည်။
"သင်အဝလွန်လာတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်ဟန်ချက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါ [ဦး နှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စင်တာ] ရှိအင်ဆူလင်ကိုခုခံနိုင်စွမ်းဟာသံသရာလည်စေနိုင်တယ်" အာရုံကြောဆိုင်ရာသုတေသနများအတွက်မက် Planck အင်စတီကျု၏ Jens Brüningကဆိုသည်။ ဒါကအဝလွန်ခြင်းရဲ့လမ်းစဖြစ်တယ်လို့သက်သေအထောက်အထားမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါဟာအဝလွန်ခြင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်။
ယခင်လေ့လာမှုများက Brulin ၏ဖော်ပြချက်အရနို့တိုက်ကျွေးခြင်းအပြုအမူကို ဦး နှောက်၏ hypothalamus အပေါ်တွင်အင်ဆူလင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်နဗ်ကြောပညာထက် ပို၍ အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပညာနှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်အလွန်အမင်းစိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသောကုမ္ပဏီ၊ အစားအစာနှင့်အနံ့တို့ကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့စားသောက်သည်။ “ ကျွန်တော်တို့ဟာအပြည့်အဝခံစားရပေမယ့်ဆက်ပြီးစားနေပါတယ်။
သူ့အဖွဲ့ပိုကောင်းအစားအစာများ၏အကြိုးရှုထောင့်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုခငျြနဲ့အင်ဆူလင်ပိုမြင့်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာသြဇာလွှမ်းမိုးအထူးဘယ်လောက်။ သူတို့ဟာကအခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများတို့တွင်အ dopamine လွှတ်ပေးရန်သော midbrain, လှုံ့ဆျောမှု, ပြစ်ဒဏ်နှင့်ဆုလာဘ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်အတွင်းဓာတုတမန်၏သော့ချက်အာရုံခံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ အင်ဆူလင်အချက်ပြသူတွေကိုအာရုံခံအတွက် inactivated တဲ့အခါသူတို့သိပ်စားရကြ၏အဖြစ်, ကြွက် fatter နှင့်လေးလံကြီးပွားသတည်း။
သူတို့ကအင်ဆူလင်ပုံမှန်အားဖြင့်အင်ဆူလင် receptors ချို့တဲ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောတုံ့ပြန်မှုအဲဒီအာရုံခံပိုပြီးမကြာခဏမီးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အစားအစာကိုတိုတိုထောက်ပံ့ရေးအတွက်အခါအဆိုပါကြွက်လည်း, ဦးနှောက်၏အကျိုးကိုစင်တာများပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှအင်ဆူလင်အပေါ်မူတည်ကြောင်းနောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားများကိုကင်းနဲ့သကြားတစ်ဦးပြောင်းလဲတုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်။
"စုပေါင်းလေ့လာမှုအရနို့တိုက်ကျွေးမှုကိုကာလရှည်ထိန်းချုပ်မှုရှိ catecholaminergic အာရုံခံဆဲလ်များ၌အင်ဆူလင်ဓာတ်ပြုခြင်းသည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ourကိုပြသည်" သုတေသီများရေးသားခဲ့သည်။ " အာရုံကြော subpopulation (s) အတိအကျနှင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်တာ ၀ န်ရှိသောဆယ်လူလာယန္တရားများအားထပ်မံရှင်းလင်းချက်သည်အဝလွန်ခြင်းကိုကုသရန်အလားအလာရှိသောပစ်မှတ်များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
တစ်ဦးကိုနောက်ခြေလှမ်းအဖြစ်, Brüningသူတို့အင်ဆူလင်သူတွေဟာသောဆုလာဘ်စင်တာအတွက်လှုပ်ရှားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါဘယ်လိုကြည့်ဖို့ဦးနှောက်မှကယ်နှုတ်ခဲ့ကြသူတွေကိုအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) လေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်သွားရန်စီစဉ်ဟုပြောသည်။
ဦးနှောက်ထဲမှာအင်ဆူလင်အရေးယူအဝလွန်ခြင်းမှ (2011) ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်
အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်ဇွန်လ 6th, 2011
အဆီကြွယ်ဝသောအစားအစာသည်သင့်ကိုအဆီစေသည် ဒီရိုးရှင်းတဲ့ညီမျှခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဦး နှောက်ထဲက neurotransmitter တွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းအင်ဟန်ချက်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အချက်ပြလမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်။ အာရုံကြောသုတေသနနှင့် Cologne တက္ကသိုလ်မှအို-ဆက်စပ်ရောဂါများ (CECAD) တွင်ဆယ်လူလာစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်ချက်ထဲမှာ Excellence ၏ Cluster များအတွက် Cologne-based မက် Planck အင်စတီကျုမှာသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤရှုပ်ထွေးထိန်းချုပ်မှုဆားကစ်အတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းရှင်းလင်းခဲ့ကြသည်။
သူတို့ကဘယ်လိုဟော်မုန်းဖေါ်ပြခြင်းအတွက်အရာ၌နန်းထိုင်ကြပါပြီ အင်ဆူလင်ဟာ ventromedial hypothalamus အဖြစ်လူသိများသည်ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်ဆောင်ရွက်သည်။ High-အဆီအစားအစာစားသုံးမှုထက်ပိုအင်ဆူလင်ပန်ကရိယအားဖြင့်ဖြန့်ချိခံရဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါကအင်ဇိုင်း P1-kinase အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍထားတဲ့အတွက်ဦးနှောက်အတွက်အထူးအာရုံကြောဆဲလ်တွေ, အ SF-13 အာရုံခံအတွက်တစ်အချက်ပြအဆငျ့ဆငျ့အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အတော်ကြာကြားခံခြေလှမ်းများ၏သင်တန်းကျော်, အအင်ဆူလင်မွတ်မပြေ၏ခံစားချက်နှိမ်နင်းနှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်လျှော့ချကြောင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်အာရုံကြော၏ထုတ်လွှင့်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ဤသည်အဝလွန်နှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုအားပေးအားမြှောက်။
hypothalamus သည်ခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းအင်မျှတမှုကိုထိန်းညှိပေးသည့်စွမ်းအင် homeostasis တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ POMC ဆဲလ်အဖြစ်လူသိများသည်ဦးနှောက်၏ဤအပိုငျးမှာအထူးအာရုံခံ, အရှင် neurotransmitters တုံ့ပြန်နှင့်အပြုအမူနှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်အစာစားခြင်းထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဟော်မုန်းအင်ဆူလင်အရေးပါသောတမန်ပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဆူလင်အစားအစာထဲမှာကိုလောင်သည့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဆဲလ်တွေ (ဥပမာကြွက်သား) ပစ်မှတ်ထားပို့ဆောင်ခံရဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်တစ်ခုနှင့်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်ကဤဆဲလ်ထို့နောက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာကိုစားသုံးပါကပန်ကရိယတွင်အင်ဆူလင်ဓာတ်ပိုမိုထုတ်လုပ်ပြီး ဦး နှောက်တွင်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာသည်။ ဦး နှောက်အတွင်းရှိအင်ဆူလင်နှင့်ပစ်မှတ်ရှိသောဆဲလ်များအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်ခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းအင်မျှတမှုကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်အင်ဆူလင်အားဖြင့်ကျင့်သုံးထိန်းချုပ်မှုနောက်ကွယ်မှအိပ်ရသောတိကျသောမော်လီကျူးယန္တရားများအကြီးအကျယ်ရှင်းလင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးကသုတေသန Jens Brüningကဦးဆောင်အဖွဲ့အာရုံကြောသုတေသနများအတွက်မက် Planck အင်စတီကျု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် CECAD ၏သိပ္ပံနည်းကျညှိနှိုင်းရေးမှူး (အို-Associated ရောဂါများအတွက်ဆယ်လူလာစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်ချက်), Cologne တက္ကသိုလ်မှထူးချွန်၏စပျစ်သီးပြွတ်၏ရှင်းပြချက်အတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းအောင်မြင်ခဲ့ပါသည် ဤရှုပ်ထွေးစည်းမျဉ်းဖြစ်စဉ်ကို။
သိပ္ပံပညာရှင်ပြခဲ့ကြသကဲ့သို့, SF-1 အာရုံခံအတွက်အင်ဆူလင် - က hypothalamus အတွက်အာရုံခံနောက်ထပ်အုပ်စုတစု - တစ်အချက်ပြအဆငျ့ဆငျ့အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာသို့သော်ဤဆဲလ်တွေမြင့်မားတဲ့ဆီအစားအစာစားသုံးခြင်းနှင့်အဝလွန်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်သောအခါမှသာအင်ဆူလင်အားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံရဖို့ပေါ်လာပါသည်။ အဆိုပါအင်ဇိုင်း P13-kinase တမန်တ္ထုများ၏ဤအဆငျ့ဆငျ့အတွက်ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကြားခံခြေလှမ်းများ၏သင်တန်းမှာတော့အင်ဇိုင်းအိုင်း channel များကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အားဖြင့်အာရုံကြော၏ထုတ်လွှင့်ကာကွယ်ပေးသည်။ အဆိုပါသုတေသီများ SF-1 ဆဲလ် POMC ဆဲလ်နှင့်အတူဤလမ်းအတွက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုသံသယ။
Kinases များသည်ပရိုတင်းသို့မဟုတ်အခြားအော်ဂဲနစ်မော်လီကျူးတစ်ခုသို့ဖော့စဖိတ်အုပ်စုပေါင်းထည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖော့စဖောရယ်လ်ဖြင့်အခြားမော်လီကျူးများကိုသက်ဝင်စေသည့်အင်ဇိုင်းများဖြစ်သည်။ “ အင်ဆူလင်သည် SF-1 ဆဲလ်များ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိယင်း၏ receptor နှင့်ပေါင်းစပ်ပါက၎င်းသည် PI3-kinase ကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်” ဟုလေ့လာမှု၏ပထမဆုံးစာရေးဆရာတိကလော့က်နာကရှင်းပြသည်။ "PI3-kinase, အလှည့်အတွက် phosphorylation မှတဆင့်နောက်ထပ်အချက်ပြမော်လီကျူး, PIP3 ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ PIP3 သည်ဆဲလ်နံရံရှိသက်ဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများကိုပိုတက်စီယမ်အိုင်းယွန်းများစိမ့်ဝင်စေသည်။ ၄ င်းတို့စီး ၀ င်မှုကြောင့်အာရုံခံဆဲလ်ကိုပိုမိုနှေးကွေးစေပြီးလျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုများကိုနှိမ်နင်းသည်။
"ထို့ကြောင့်အဝလွန်သူများအတွက်အင်ဆူလင်သည် SF-1 အာရုံခံဆဲလ်၏ကြားခံဌာနမှတဆင့်စိတ်ပြေစေခြင်း၏တာ ၀ န်ဖြစ်သော POMC neuron များကိုသွယ်ဝိုက်တားဆီးနိုင်သည်" သိပ္ပံပညာရှင်ဆိုပါစို့။ “တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စားနပ်ရိက္ခာစားသုံးမှုတိုးလာသည်။ ” အာရုံခံ၏နှစ်မျိုးဒီလမ်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှငျ့ဆကျသှယျသောတိုက်ရိုက်သက်သေပြနေဆဲသို့သော်တွေ့ရှိခဲ့ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
အင်ဆူလင်ကဦးနှောက်ထဲမှာပြုမူပုံကိုထွက်ရှာရန်အလို့ငှာခုနှစ်, Cologne-based သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အဘယ်သူ၏အင်ဆူလင် receptors နဂိုအတိုင်းခဲ့ကြသည်ကြွက်နှင့်အတူ SF-1 အာရုံခံတခုတခုအပေါ်မှာအင်ဆူလင်အဲဒီ receptor ရှိကြကြောင်းကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ပုံမှန်အစားအသောက်စားသုံးမှုနှင့်တကွ, သုတေသီများအုပ်စုနှစ်စုအကြားမျှခြားနားချက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤသည်အင်ဆူလင်ပါးလွှာတစ်ဦးချင်းစီတွင်ဤဆဲလ်တွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်အဓိကဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကငျြ့သုံးမထားဘူးကြောင်းညွှန်ပြလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကြွက်က high-အဆီအစားအစာကျွေးမွေးခဲ့ကြသည်တဲ့အခါမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ receptors နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ counterparts တွေကိုလျှင်မြန်စွာအလေးချိန်ရရှိခဲ့စဉ်သို့သော်ယင်းချွတ်ယွင်းအင်ဆူလင်အဲဒီ receptor ရှိသူများ, ပါးလွှာနျြရစျ။ အဆိုပါအလေးချိန်အမြတ်ထားတဲ့စာစားချင်စိတ်ကိုတိုးခြင်းနှင့်ကိုလျှော့ချကယ်လိုရီအသုံးစရိတ်နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အင်ဆူလင်၏ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအနေနဲ့မမှန်အစားအစာပေးဝေရေးနှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများတိုးချဲ့ကာလမှခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်လိုက်လျောညီထွေဖွဲ့စည်းနိုင်: High-အဆီအစားအစာတစ်ခုပိုလျှံထောက်ပံ့ရေးယာယီမရရှိနိုင်လျှင်ခန္ဓာကိုယ်အင်ဆူလင်၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့်အထူးသဖြင့်ထိရောက်စွာစွမ်းအင်သိုက်ကိုချချနိုင် ။
ယခုသုတေသန၏တွေ့ရှိချက်များသည်ခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းအင်မျှတမှုကိုပစ်မှတ်ထားသော ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုအထောက်အကူပြုမည်လားဆိုသည်ကိုလက်ရှိအချိန်တွင်ပြောရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယန်းဘရွန်းက“ ကျွန်တော်တို့ဟာလက်တွေ့ကျတဲ့လျှောက်လွှာတစ်ခုနဲ့ဝေးနေတုန်းပဲ။ “ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘယ်လောက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုနဲ့ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုနားလည်မှသာလျှင်ကုသမှုကိုစတင်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်မှာပါ။ ”
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: တိKlöckenerရှိမုန်ဟက်, Bengt အက်ဖ် Belgardt, Lars Paeger, လင်ဒါ AW Verhagen, Andreas Husch, ဂျုံဝူး Sohn, ဂျစ် Hampel, Harveen Dhillon, ဂျက်ဖရီအမ် Zigman, ဘရက်ဖို့ဒခဝယျလျ, ကီဗင်ဒဗလျူ Williams က, ယောလ K. Elmquist, Tamas အယ်လ် Horvath, ပေတရု Kloppenburg, Jens C. Brüning, High-အဆီကျွေးမွေး SF-13 VMH အာရုံခံ၏အင်ဆူလင် receptor / P1k-မှီခိုတားစီး, သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ, ဇွန်လ 5th 2011 မှတဆင့်အဝလွန်ခြင်းကိုအားပေးအားမြှောက်
အူစိတ်ကြွဆေး Endocannabinoids အတွင်းမှာပဲအဆီအားဖြင့်အစပျိုး Bing ယန္တရား (2011)
Stephanie Pappas, LiveScience အကြီးတန်းစာရေးဆရာ
နေ့စွဲ: 04 ဇူလိုင်လ 2011
ချစ်ပ်များနှင့်ကြော်များကဲ့သို့အဆီအစာများသည်ကိုယ်ခန္ဓာအားဆေးခြောက်များနှင့်တူသောဓာတုပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟုသုတေသီများကအမျိုးသားသိပ္ပံအကယ်ဒမီ (PNAS) ၏ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီ endocannabinoids လို့ခေါ်တဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာဒိန်ခဲကြော်တစ်ခွက်လောက်ပြန်စားဖို့သံသရာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လေ့လာမှုကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ဆေးဝါးဗေဒပါမောက္ခ Irvine မှသုတေသနပြုသူသုတေသီ Daniele Piomelli ကဒီအူထဲမှာ endocannabinoid အချက်ပြမှုကအူထဲမှာအချက်ပြခြင်းဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္playsကနေပထမဆုံးသရုပ်ပြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လေ့လာမှုအရအူအတွင်းရှိအဆီသည် endocannabinoids ကို ဦး နှောက်အတွင်းသို့ထုတ်လွှတ်စေသော်လည်းသင်၏နားကြားရှိမီးခိုးရောင်များသည်သဘာဝဆေးခြောက်ကဲ့သို့သောဓာတုပစ္စည်းများပြုလုပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါမဟုတ်ပါ။ လူ့အသားအရေကိုလည်းပစ္စည်းပစ္စယစေသည်။ အရေပြားကိုပင်ဆေးကြောနိုင်သည့်အပင်များသည်အပင်များအတွက်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။ လေနှင့်နေမှအဆီပြန်ခြင်း။
Endocannabinoids ကိုလည်းသူတို့ဆေးခြောက်ဆေးလိပ်သောက်အခါ munchies ကလူရဖို့ကရှင်းပြသည်ရာ PNAS အတွက် 2009 လေ့လာမှုအရသိရသည်စာစားချင်စိတ်ကိုနှင့်အရသာ၏အသိကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့လူသိများကြသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုအသစ်မှာတော့ Piomelli နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသူတို့စားရကြ၏သို့မဟုတ်သောက်အဖြစ်၎င်းတို့၏းဗိုက်ရဲ့ contents တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်မယ်လို့ပြွန်နှင့်အတူကြွက်တပ်ဆင်။ ဤရွေ့ကားအစာအိမ်ပြွန်သူတို့တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်လိုအခြေအနေမျိုးအတွက်, သုတေသီအဆီလျှာပေါ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ရှိမရှိပြောပြရန်ခွင့်ပြု
အဆိုပါကြွက်များကနျြးမာရေးလှုပ် (vanilla အာမခံ), တစ်သကြားဖြေရှင်းချက် peptone ဟုခေါ်သောပရိုတိန်းကြွယ်ဝအရည်, ဒါမှမဟုတ်ပြောင်းဖူးဆီလုပ်မယ့်မြင့်မားတဲ့အဆီအဖျော်ယမကာအပေါ် SIP မှရတယ်။ ထိုအခါသုတေသီများလျှင်မြန်စွာဆန်းစစ်ဘို့မိမိတို့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအေးခဲနေသောယင်းကြွက်များ anesthetized နှင့်ခွဲဖြာ။
သုတေသီများကသကြားနှင့်ပရိုတင်းများသည်ခန္ဓာကိုယ်၏သဘာဝဆေးခြောက်ဓာတုပစ္စည်းများထုတ်လွှတ်မှုကိုမထိခိုက်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့်အဆီအပေါ် supping ကိုပြု၏။ ရလဒ်အနေဖြင့်လျှာပေါ်ရှိအဆီသည် ဦး နှောက်ဆီသို့အချက်ပြမှုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၎င်းသည် vagus nerve ဟုခေါ်သောအာရုံကြောအစုအဝေးမှတစ်ဆင့်အူသို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးပို့သည်။ ဒီမက်ဆေ့ခ်ျကအူအတွင်း endocannabinoids ထုတ်လုပ်မှုကိုမှာကြားသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်တူညီသောသတင်းစကားကိုတွန်းအားပေးနေသောအခြားအချက်ပြမှုများကိုအဆက်မပြတ်တွန်းအားပေးနေသောအူတွင်စား၊ စား၊ စားပါ။
ဤသတင်းစကားကိုနို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သမိုင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေကြပြီ, Piomelli ကဆိုသည်။ fats ရှင်သန်မှုအရေးပါဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ကနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေအစားအစာထဲမှာသဖြင့်လာတစ်ချိန်ကခက်ခဲခဲ့ကြသည်။ သို့သော်နေရာတိုင်းတွင်အမှိုက်ပုံးအပြည့်ပါ ၀ င်သောစတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိရာယနေ့ကမ္ဘာတွင်အဆီ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အလွယ်တကူနောက်ဆုတ်သွားနိုင်သည်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက် endocannabinoid အချက်ပြမှုများ၏ဧည့်ခံပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင်များကလူဦးဖက်တီးအစားအစာ overeat မှမောင်းသောသံသရာကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဦးနှောက်ထဲမှာ endocannabinoid receptors ပိတ်ဆို့ခြင်းစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး, Piomelli ဆိုပါတယ်ပေမယ့်အူပစ်မှတ်ထားဖို့ဒီဇိုင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသူတို့အားအနုတ်လက္ခဏာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်မပေးပေလိမ့်မည်။
မည်သို့သောအစားအစာများက ဦး နှောက်၏အစားအစာရှာဖွေမှုကို ဦး စားပေးသည် (2015)
ခရစ္စတိုဖာ Packham နေဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2016
(Medical Xpress) - ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင်လက်ရှိအဝလွန်မှုပျံ့နှံ့မှုသည်ဖွင့်လှစ်သောစျေးကွက်များနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံရှိကျန်းမာရေးအရာရှိများအတွက်သတိပေးချက်ဖြစ်သင့်သည်။ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများ၊ စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များနှင့်ကြော်ငြာရှင်များသည်အလွန်အရေးကြီးသော၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းသောအစားအစာများနှင့်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်များအလွယ်တကူရရှိနိုင်သောပတ် ၀ န်းကျင်များကိုဖန်တီးရန်ပူးပေါင်းကြသည်; သို့သော်လူများသည်စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှုအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ဦး နှောက်၏ပရိုဂရမ်းမင်းသည်ခေတ်သစ်အစားအစာဂေဟစနစ်ကိုဇီဝြဖစ်ပျက်ကျစွာကျန်းမာစွာကိုင်တွယ်ရန်ခက်ခဲစေနိုင်သည်။
လူသားများကဲ့သို့သတ္တဝါအားလုံးကဲ့သို့ရှေးခေတ်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအစီအစဉ်များသည်အစားအစာများစားသုံးရန်နှင့်အစားအစာရှာဖွေရန်ရှင်သန်မှုအပြုအမူများကိုသေချာစေရန်အထူးပြင်ဆင်ထားသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာဗိသုကာကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ထိုအပြုအမူများကိုအကြီးအကျယ်သြဇာလွှမ်းမိုးသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းများကလူတို့၏ပျော်ရွှင်မှုတုံ့ပြန်မှုကိုတွန်းအားပေးခြင်းနှင့်ပိုလျှံသောကယ်လိုရီများရှာဖွေရန်လူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုပရိုဂရမ်ဖြင့်ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုသိပ္ပံနည်းကျပြုပြင်ခဲ့သည်။ အလွန်အာဟာရပြည့်ဝသော၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းသောအစားအစာများပေါများသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အစားအစာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များပျံ့နှံ့ခြင်းသည်အစားအသောက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အလားအစားသောက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Calgary နှင့်ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှတက္ကသိုလ်ကနေဒါသုတေသီတစ်ဦးကအုပ်စုတစ်စုမကြာသေးမီကအတွက် mouse ကိုလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု သောသူတို့အစားအစာ-ရှာကြံအပြုအမူတွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုနောက်ကွယ်မှအာရုံကြောယန္တရားများစူးစမ်း။
သူတို့ကအလွန်အရေးပါတယ်လို့၏ရေတိုရေရှည်စားသုံးမှုအစားအစာ-အထူးသ, High-အဆီအစားအစာ-အမှန်တကယ်အနာဂတ်စားနပ်ရိက္ခာချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေ primes ဒူကသတင်းပို့သည်။ သူတို့ကအကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ်သို့ excitatory Synaptic ဂီယာ၏များ၏အားကောင်းကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ dopamine အာရုံခံနှင့်ဒူက high-အဆီပါတဲ့အစားအစာကနဦး 24 နာရီထိတွေ့ပြီးနောက်ရက်ပေါင်းကြာရှည်ခံသည်။
ဤပြောင်းလဲမှုများသည် ဦး နှောက်၏ ventral tegmental (ရိယာ (VTA) နှင့်၎င်း၏ mesolimbic စီမံချက်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကို motivationally သက်ဆိုင်ရာရလဒ်များ-in ကိုတစ်နည်းခန့်မှန်းများအတွက်အသုံးပြုသည် VTA တချို့လမ်းအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်တွေ့ရှိလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်မတရားသောအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
သုတေသီများက "dopamine neuron များသို့တိုးမြှင့် excitatory synaptic transmission သည်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုကိုအဓိကအချက်အလက်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်ဟုယူဆသောကြောင့် excitatory synaptic transmission မှာပြောင်းလဲမှုသည်ချိုသောအဆီပါဝင်သောအစားအစာများနှင့်အဓိကဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအရာများမှတွေ့ရှိပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အစားအစာချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူ၏အခြေခံဖြစ်နိုင်သည်" တိုးပွားလာသောအစားအစာစားသုံးမှု။ "
အဆိုပါတိုးမြှင့် Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုက high-စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆအစားအစာထိတွေ့ပြီးနောက်ရက်ပေါင်းကြာနှင့်တိုးချဲ့ excitatory Synaptic သိပ်သည်းဆကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါသုတေသီများ VTA တိုက်ရိုက်အင်ဆူလင်မိတ်ဆက် excitatory ဖိနှိပ်တွေ့ရှိခဲ့ Synaptic ဂီယာ dopamine အာရုံခံပေါ်သို့နှင့်လုံးဝဒူက high-အဆီအစားအစာမှ 24 နာရီ access ကိုအပြီးလေ့လာတွေ့ရှိအစားအစာ-ရှာကြံအပြုအမူတွေကိုဖိနှိပ်။
ထိုအစာစားချိန်အတွင်း dopamine neuron များသို့ glutamate ထုတ်လွှတ်သည့်နေရာအရေအတွက်တိုးများလာသည်။ အင်ဆူလင်သည်ဤဆိုဒ်များကိုပိတ်ဆို့ရန်လုပ်ဆောင်သည်။ ဤသည်ကအဝလွန်ခြင်းကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကုထုံးဆိုင်ရာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှတ်သားထားခြင်းကြောင့်စာရေးသူများအနေဖြင့်အစားအစာစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းကြောင့်သို့မဟုတ်အင်ဆူလင်အင်ဆူလင်အင်ဆူလင်အင်ဆူလင်ဓာတ်သည် overeating ကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်းရှိမရှိအနာဂတ်အလုပ်ကိုဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ အစာ-related တွေကို။ "
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: အရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုလျင်မြန်စွာ VTA အတွက် Synaptic သိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အစားအစာကိုချဉ်းကပ်အပြုအမူ primes ။ PNAS 2016; ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်ဖေဖော်ဝါရီလ 16, 2016 ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ, Doi: 10.1073 / pnas.1515724113
အလွန်အာဟာရရှိသောအစားအစာနှင့်စွမ်းအင်သိပ်သည်းသောအစားအစာများကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အစားအသောက်ရှာဖွေမှုသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုရှိစေကာမူအဝလွန်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဆိုပါ ventral tegmental areaရိယာ (VTA) နှင့်၎င်း၏ mesolimbic စီမံချက်များစိတ်ခွန်အားနိုးသက်ဆိုင်ရာရလဒ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အသုံးပြုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလေ့လာသင်ယူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အရေးပါသောအဆောက်အ ဦ များဖြစ်ကြသည်။ အစားအစာနှင့်သက်ဆိုင်သောကြော်ငြာခြင်းနှင့်အရသာရှိစေရန်အစာစားသုံးခြင်း၏အဓိကသက်ရောက်မှုများကအစားအစာကိုစားသုံးရန်မောင်းနှင်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ယန္တရားနှင့်ဤအခြေခံအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစားသုံးပြီးနောက်နောက်ဆုံးရက်များရှိမရှိမသိရှိပါ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာနိသင်ရှိသောရေတိုစားသုံးမှုကိုအနာဂတ်စားနပ်ရိက္ခာချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုတို့တွင်အဓိကကျနိုင်သည်ကိုပြသသည်။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအစပိုင်းမှာ endocannabinoid လေသံတိုးပွားမှုကြောင့်ထေမိစေတဲ့ excopatory synaptic transmission အား dopamine neuron များသို့အားဖြည့်ပေးတယ်။ ဤသည်တိုးမြှင့် Synaptic အစွမ်းသတ္တိကို VTA dopamine အာရုံခံပေါ်သို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Synaptic သိပ်သည်းဆအတွက်ကြာရှည်စွာတိုးခြင်းဖြင့်ကမကထပြုခဲ့သည်။ dopamine neuron များသို့စိတ်လှုပ်ရှားစေသည့် synaptic transmission ကိုတားဆီးပေးသော VTA သို့အင်ဆူလင်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် ၂၄ နာရီ SHF သို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အစားအစာချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ဤရလဒ်များအရအရသာရှိသည့်အစားအစာများကိုခဏတာထိတွေ့ခြင်းကပင် mesolimbic dopamine neuron များအား“ rewiring” အားဖြင့်အနာဂတ်နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူကိုမောင်းနှင်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
ထိန်းချုပ်ရေး compulsive Sucrose (2015) ရှာကြောင်းဒီကုဒ်ဒါဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Circuits
•သူတို့အလေ့အကျင့်မှပြောင်းလဲပြီးနောက် LH-VTA အာရုံခံဆုလာဘ်-ရှာကြံလုပ်ရပ်များဝှက်
• VTA အန်ကုက်လုပ်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ထား၏ LH အာရုံခံတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်မြစ်အောက်ပိုင်း
• LH-VTA စီမံချက်များ compulsive sucrose ရှာကျော် bidirectional ထိန်းချုပ်မှုများကို
•အသက်သွင်း LH-VTA GABAergic စီမံချက်များ maladaptive အလှနျကိုကျခဲအပြုအမူတိုးပွါး
အဆိုပါ ventral tegmental (ရိယာ (VTA) မှနှစ် ဦး နှစ်ဖက် hypothalamic (LH) ပရောဂျက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုချဖို့ချိတ်ဆက်ခဲ့ပေမယ့်အပြုအမူ၏တိကျသောရှုထောင့်မှမြင့်တက်ပေးသော LH-VTA ကွင်းဆက်အတွင်းရှိတွက်ချက်မှုကိုခွဲထုတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ LH-VTA အာရုံခံဆဲလ်များသည်ဆုလာဘ်ရရှိမှုအပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိဘဲဆုလာဘ်ကိုရှာဖွေခြင်း၏လေ့လာမှုပြုချက်ကို encode လုပ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, VTA ၏မြစ်အောက်ပိုင်း LH အာရုံခံဆုလာဘ် - ကြိုတင်ခန့်မှန်းအချက်များနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲဆုလာဘ်ပျက်ကွက်။ ကျနော်တို့ LH-VTA လမ်းကြောင်းဟန့်တား "compulsive" sucrose ရှာကြံပေမယ့်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ကြွက်တွေထဲမှာမအစားအစာစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေကြောင်းပြသပါ။ ကျနော်တို့ LH VTA dopamine (DA) နှင့်ဂါဘမြို့သားအာရုံခံပေါ်သို့ excitatory နှင့် inhibitory input ကိုပို့ပေးနှင့်, GABAergic projection drives တွေကိုအစာကျွေး-related အပြုအမူကြောင်းကိုထုတ်ဖေါ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုအမျိုးအစား, function ကိုနှင့် LH အာရုံခံ၏ဆက်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်မွမ်းမံခြင်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော-over ရောဂါများအတွက်ကုထုံးကြားဝင်များအတွက်အလားအလာပစ်မှတ်များကိုရှင်သန်မှုအတွက်လိုအပ်သောအစာကျွေးကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ, ရွေးချယ် compulsive သကြားစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရုံကြော circuit ကိုသတ်မှတ်။
Orexins ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး / အစားအစာမှီခိုဖို့အကူးအပြောင်း၏ Impulse-မောင်းနှင်မူးရူးစားသုံးမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသလား? (2015)
Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2015 ဧပြီ 28 ။
Alcaraz-Iborra M က1, Cubero ငါ2.
Orexins (နွားကို) arousal, စိတ်ဖိစီးမှု, လှုံ့ဆျောမှုသို့မဟုတ်အစာစားခြင်းအပြုအမူတွေအပါအဝင်ဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ကျယ်ပြန့အတွက်အခြေခံအကျဆုံးအခန်းကဏ္ဍသောနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဒေသတွင်ဖန်တီး neuropeptides ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါစွဲသံသရာမူဘောင် (Koob, 2010) အရဤစာတမ်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက် Impulse နှင့်မူးရူးကဲ့သို့စားသုံးမှုအတွက်အီသနော, အရေးပါတယ်လို့စားနပ်ရိက္ခာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍအပါအဝင်အကြိုးစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏ compulsive-မောင်းနှင်စားသုံးမှုအတွက်သော့ချက် modulator တွေကိုအဖြစ်နွားစနစ်၏အခန်းကဏ္ဍ အဖြစ်ကောင်းစွာမဟုတ်တဲ့မှီခိုသက်ရှိ။
ကျနော်တို့အားနည်းချက်သက်ရှိထဲမှာမူးယစ်ဆေး / အစားအစာမူးရူးကဲ့သို့စားသုံးမှုအလှည့်၌, compulsive-မောင်းနှင်မူးရူး-စားသုံးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဖို့အကူးအပြောင်းမြှင့်တင်ရန်မယ်လို့အပြုသဘောကွင်းဆက်အတွက်ပိုကောင်း Impulse, နောက်ထပ် Impulse-မောင်းနှင်မူးရူးစားသုံးမှု elicits သောနွားသည်လှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးကြောင်းဤနေရာတွင်အဆိုပြု အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ / အစားအသောက်မမှန်။
မော်ဒယ်အစာစားနေတဲ့မူးရူးအတွက်မြင့်မားတဲ့အဆီစားသုံးမှုအတွက်စက်လှေကား differential အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၏ dopamine အာရုံခံပါဝငျနှင့် (2015) အချက်ပြ ghrelin လိုအပ်ပါတယ်
Psychoneuroendocrinology ။ 2015 အောက်တိုဘာ; 60: 206-16 ။
Valdivia S က1, Cornejo အမတ်1, Reynaldo M က1, de Francesco PN1, Perello M က2.
အရက်ကိုစားခြင်းဆိုသည်မှာလူ့အစာစားခြင်းမမှန်သည့်အရာများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ Ad libitum သည်ကြွက်များကိုနေ့စဉ်နှင့်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်မြင့်မားသောအဆီဓာတ်ပါသောအစားအစာ (HFD) နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အစာရေစာပေါများခြင်း၊ စားသုံးမှုမြင့်တက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်အပြုအမူအားထိန်းချုပ်ခြင်းမှမလိုက်နာခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုသို့ပြောင်းလဲခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အဆိုပြုထားသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ကြွက်များတွင်အမူအကျင့်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုပေါင်းစပ်မှုများကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ HFD ထိတွေ့မှုနှင့် HFD ထိတွေ့မှုများကိုဆဲလ်အသုံးပြုခြင်း c-Fos ၏အမှတ်အသားအရဤအခြေအနေများအောက်တွင်လှုံ့ဆော်နေသောအာရုံခံ ဦး နှောက်ပစ်မှတ်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီအပြုအမူ၏ modulation အတွက်အသီးသီး orexin သို့မဟုတ် ghrelin အချက်ပြမှု၏အခန်းကဏ္studyကိုလေ့လာရန်ဆေးဝါးနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောကြွက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကျနော်တို့လေးယောက်နေ့စဉ်နှင့်အချိန်-ကန့်သတ်ထားသွေးဆောင် HFD မှ access လုပ်ပါတယ်တွေ့ရှိခဲ့: ယေဘုယျအားဖြင့် (ဈ) တစ်ဦးမြင့်တက်ပရိုဖိုင်းနဲ့အားကောင်းတဲ့ hyperphagia, သော ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံခြင်းနှင့် accumbens အာရုံခံ၏ကွဲပြားခြားနားသော Sub-လူဦးရေ၏ (ii) တစ်ခုဖွင့်သုံး, တစ်တစ်ခုတည်း HFD စားသုံးမှုဖြစ်ရပ်အပြီးလေ့လာတွေ့ရှိသည့် activation ထက်ပိုမိုသိသာနှင့် (iii) hypothalamic orexin အာရုံခံတစ်ခု activation orexin အချက်ပြပိတ်ဆို့ခြင်း HFD စားသုံးမှု၏တင်းမာမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်ပျက်ကွက်ပေမယ့်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ ghrelin အဲဒီ receptor-လစ်လပ်ကြွက်ထိတွေ့မှု၏အဆက်ဆက်ရက်ပေါင်းကျော် HFD စားသုံးမှုမြင့်လာနှင့်အပြည့်အဝ HFD စားသုံးမှုမှတုံ့ပြန်မှုအတွက် mesolimbic လမ်းကြောင်း၏ activation သွေးဆောင်နှစ်ဦးစလုံးကျရှုံးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိဒေတာထပ်ခါတလဲလဲစဉ်အတွင်းမြင့်မားတဲ့အဆီစားသုံးမှုအတွက်တင်းမာမှုဟာ ventral tegmental ဧရိယာ၏ dopamine အာရုံခံပါဝင်နိုင် ghrelin အချက်ပြလိုအပ်ပါတယ် differential access လုပ်ပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ medial prefrontal cortex အတွက် Opioid စနစ်ကမူးရူးကဲ့သို့စား (2013) mediates
စှဲလမျးသူ Biol ။ 2013 ဇန်နဝါရီ 24 ။ Doi: 10.1111 / adb.12033 ။
Blasio တစ်ဦးက, Steardo L ကို, Sabino V ကို, ဝါဂွမ်း P ကို.
Bing စားရောဂါတခုဖြစ်ပါတယ် စှဲမွဲမှုအလွန်အကျွံဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရောဂါ -like အစာ အချိန် discrete ကာလအတွင်းစားသုံးမှု။
ဒီလေ့လာမှုကမူးရူးကဲ့သို့စား၏သူတွေရဲ့စားသောက်နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်ရှိအ medial prefrontal cortex (mPFC) အတွင်း opioid စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ကျွန်တော်တစ်ဦး sugary အလွန်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ (အာခေါင်ကြွက်) သို့မဟုတ် 1 နာရီ / ရက်များအတွက် Chow အစားအစာ (Chow ကြွက်များ) တစ်ခုခုကိုရရှိရန်အထီးကြွက်လေ့ကျင့်သင်ကြား။
ကျနော်တို့ထို့နောက်အီးနျူကလီးယပ် accumbens (NACC) သို့မဟုတ် mPFC သို့ဖြစ်စေ system သို့မဟုတ် site ကို-အထူးပေးထားသည် opioid အဲဒီ receptor ရန်, naltrexone ၏သက်ရောက်မှု valuated တစ်ဦး fixed အချိုး 1 (FR1) နှင့်စားနပ်ရိက္ခာများအတွက်အားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားပေါ်မှာ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက် NACC နှင့် mPFC အတွက် opioids peptides အဘို့အ coding, ထိုမျိုးဗီဇ proopiomelanocortin (POMC), လိုလားသူ dynorphin (PDyn) နှင့်လိုလားသူ enkephalin (PEnk) ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအကဲဖြတ်။
အာခေါင်ကြွက်လျှင်မြန်စွာလေးကြိမ်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့စားသုံးမှုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ Naltrexone, system နှင့် NACC သို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါ, Chow နှင့်အာခေါင်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်တိုးတက်သောအချိုးအောက်တွင်စားရန်ရိက္ခာနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်တုံ့ပြန် FR1 လျှော့ချ; အဆိုပါ mPFC သို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါအပြန်အလှန်သည်, သက်ရောက်မှုမူးရူးစားကြွက်အဘို့အမြင့်မားရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ကြွက်များကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာထို့အပြင်ငါတို့သည် POMC အတွက်နှစ်ဆတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အာခေါင်ကြွက်များ၏ mPFC အတွက် PDyn ဗီဇစကားရပ်ထဲမှာ ~50% လျှော့ချရေးကိုတှေ့လြှငျ, သို့သော်အဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှုများ NACC အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကို mPFC အတွက် opioid စနစ်၏ neuroadaptations အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့မှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုအောက်ပါဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြု အစာ, Bing ကဲ့သို့သောစား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ရသော။
သုတေသီများ (2016) စွဲလမ်းရာမှအစားအစာစားသုံးမှုခွဲခြားသောဦးနှောက်ထဲမှာယန္တရားသော့ဖွင့်
မတ်လ 8, 2016
အစာစားခြင်းမမှန်မှုများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးသုတေသီများမကြာခဏကျော်ဖို့သဲလွန်စရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဦးနှောက်ထဲမှာဓာတုနှင့်အာရုံကြောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလေ့လာတယျ။ Non-homeostatic စား-သို့မဟုတ်ပိုအာခေါင်တို့ကမောင်းနှင်နေသည်စားသုံးခြင်းကိုနားလည်ခြင်း, အလေ့အထနှင့်အစားအစာတွေကို-နှင့်မည်သို့ကြောင့်ဦးနှောက်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်မတရားသောထိန်းချုပ်ကျန်းမာလေးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းလူနေမှုမြှင့်တင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ မစ်ဆူရီတက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံပညာရှင်များသည်မကြာသေးမီကမတရားသောအနေဖြင့်အစားအစာစားသုံးမှုခွဲခြားသောဦးနှောက်ထဲမှာဓါတုဗေဒဆားကစ်နှင့်ယန္တရားများရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤအယန္တရားများအကြောင်းကိုပိုမိုသိမှတ်ကြလော့သုတေသီများကျော်လျော့ချကြောင်းမူးယစ်ဆေးတိုးတက်လာအောင်ကူညီနိုင်ဘူး။
MU Bond Life Science Centre မှ graduate ကျောင်းသားနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး Kyle Parker က“ အိမ်စာမစားတဲ့အစားအစာကိုမင်းကအစားအစာတစ်ခုလုံးစားပြီးတဲ့အခါအချိုပွဲကိုစားတာလို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ “ ကျွန်မဗိုက်မဆာဘူးဆိုတာသိကောင်းသိပေမဲ့ဒီအချိုပွဲကအရသာရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စားတော့မယ်။ ထိုအပြုအမူကိုမောင်းနှင်ရာတွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုသည်မည်သည့်အရာပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်နေသည်။ ”
MON အနုပညာနှင့်သိပ္ပံကောလိပ်ရှိစိတ်ပညာသိပ္ပံတွဲဖက်ပါမောက္ခဖြစ်သည့် Bond Life Sciences Center မှသုတေသနစုံစမ်းစစ်ဆေးသူနှင့်ပါကင်၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Matthew J. Will ကအပြုအမူသိပ္ပံပညာရှင်များအတွက်အစာစားခြင်းကိုအဆင့်နှစ်ဆင့်ဟုခေါ်သည်။ နှင့် consummatory အဆင့်။
၀ င်းဂါးက“ Donut ဆိုင်အတွက်နီယွန်နိမိတ်လက္ခဏာ - တံဆိပ်နှင့်နွေးထွေးသောအနီရောင်ဒိုးနက်၏အနံ့သည်တမ်းတမှုသို့မဟုတ်အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်သောအဆင့်ကိုစတင်စေသောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များဖြစ်သည်။ "ဒီနိဂုံးအဆင့်သင်၌ဤဒိုးနတ်လက်၌ရှိသည်နှင့်စားပြီးနောက်။
Parker သည် ဦး နှောက်၏ဖျော်ဖြေရေးစင်တာကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များ၏အပြုအမူပုံစံများကိုလေ့လာပြီး ဦး နှောက်၏အစက်အပြောက်တစ်ခုအားဆု ချ၍ ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းစကားများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အားဖြည့်ပေးသည်။ ထို့နောက်သူသည်ကြွက်များကိုသူတို့၏အစာအာဟာရကိုပိုမိုချဲ့ထွင်ရန်အတွက်မုန့်ညက်ကဲ့သို့သောအစားအစာကိုကျွေးမွေးခဲ့ပြီးကြွက်များသည်ပုံမှန်ထက်နှစ်ဆခန့်စားခဲ့သည်။ သူသည် ဦး နှောက်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းကို Basolateral amygdala ဟုခေါ်ဆိုခြင်းကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းမဖွင့်သောအခါကြွက်များသည်အရက်သောက်ခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်။ သူတို့သည်အစားအစာများကိုထပ်မံရှာဖွေရန်ဆက်လက်စားသောက်ခဲ့ကြသော်လည်းပုံမှန်ပမာဏသာစားသုံးခဲ့ကြသည်။
“ ကြွက်တွေကမုန့်စိမ်းကိုလိုချင်နေသလိုပဲ။ “ သူတို့ကအစာသွားစားနေကြတာ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာနို့တိုက်ကျွေးဖို့တိကျတဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်း - အမှန်တကယ်စားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေတဲ့တိုက်နယ်ကို - နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်၊
မတရားသောစဉ်အတွင်းဦးနှောက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေ, က Parker တစ်လှည့်ဖျား-ချွတ်စမ်းသပ်မှုတက်ထားကြ၏။ မတိုင်မီကဲ့သို့ပင်သူဆုလာဘ်များနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဦးနှောက်၏ဒေသအပေါ် switched နှင့်ကြွက်များ၏တဦးတည်းအုပ်စုတစ်စုအတွက် basolateral amygdala ပေမယ့်အခြားမဟုတ် inactivated ။ ဤအချိန်, သို့သော်သူသည်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများပမာဏအတူတူစားနိုင်အောင်လုပ်ဖို့လက်လှမ်းခဲ့မြင့်အဆီဓာတ်စာ၏ပမာဏကန့်သတ်။
အပြင်ပန်း, ကြွက်နှစ်ခုစလုံးအုပ်စုများတူညီသောနို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူတွေပြသ။ သူတို့ကအစားအစာ၏တစ်ဦးသောအဘို့ကိုစားရကြ၏, ဒါပေမယ့်နောက်ကျောနှင့်ထွက်၎င်းတို့၏အစားအစာတောင်းသွားနေခဲ့တယ်။ သို့သော်ဦးနှောက်အတွင်းပိုင်း, က Parker ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲပြားမှုကိုမြင်တော်မူ၏။ activated နျူကလိယ accumbens နှင့်အတူကြွက်လှုံ့ဆော်မှုချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောတိုးချဲ့ dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု, ပြသခဲ့သည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည်ကိုလည်း basolateral amygdala ၏ပြည်နယ် dopamine အချက်ပြအဆင့်ဆင့်အပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် hypothalamus ဟုခေါ်တွင်ဦးနှောက်တစ်ဒေသထဲမှာက Parker, သာ activated basolateral amygdala နှင့်အတူကြွက်အတွက်အစာစားချင်စိတ်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့မော်လီကျူး orexin-တစ်ဦး၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းကိုမြင်တော်မူ၏။
“ စားသုံးမှုအပြုအမူကိုပိတ်ဆို့နိုင်တာက orexin အပြုအမူကိုပိတ်ပင်လိုက်တာပါပဲ။
"ဒီရလဒ်က dopamine ဟာစားသုံးမှုမှာပါ ၀ င်တဲ့တွန်းအားအဆင့်နဲ့ orexin-A မှာပါ ၀ င်ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုပိုအားကောင်းစေတယ်" လို့ Will ကပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည်ထိုအတွေ့ရှိချက်ကျော်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်တစ်ဦးပိုမိုနားလည်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ကယုံကြည်သည်။ အမှန်တကယ်စားသုံးမှုသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ vs. တဏှာ၏လွတ်လပ်သော circuitry ထုတ်ဖော်ခြင်းအားဖြင့်, ဒီကပိုတိကျတဲ့ဖြစ်ကြပြီးလျော့နည်းမလိုချင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်အလားအလာမူးယစ်ဆေးကုသဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။
Parker နှင့် Will တို့၏လေ့လာမှု၊အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens opioid-မောင်းနှင်သူတွေရဲ့စားသောက်သည့်ကြွက်များတွင်အစာစားချင်စိတ်မြင့်မားသောအဆီနို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်အပေါ် basolateral amygdala သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအခြေခံအာရုံကြော activation ပုံစံများ"မကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့သည် အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ သုတေသနမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအမျိုးသားသိပ္ပံ (DA024829) ကအစိတ်အပိုင်းအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။